सोशल मिडियामा अमेरिकी ‘फस्ट लेडी’ मेलानियाको फोटो बन्यो भाइरल ! | Screennepal
सोशल मिडियामा अमेरिकी ‘फस्ट लेडी’ मेलानियाको फोटो बन्यो भाइरल !
२०७३, ७ माघ शुक्रबारscreennepalfeature, Hollywood0
काठमाडौं, ७ माघ । हिलारी क्लिन्टनलाई हराएर अमेरिकाको राष्ट्रपति बनेका डोनाल्ड ट्रम्पको जति चर्चा छ, त्यतिकै उनकी पत्नी मेलानिया पनि । डोनाल्टले शुक्रबारबाट आफ्नो कार्यभार सम्हालेका छन् । यसैत्रेला उनकी पत्नी मेलानियाको पनि चर्चा चुलिएको छ । यतिखेर यी विश्वकै शक्तिशाली मुलुककी ‘फस्ट लेडी’को तस्बिर सोशल मीडिया खुबै भाइरल बनेको छ । ६४ वर्षीया मेलानिया स्लोभेनियाकी पूर्व मोडल हुन् । उनले १६ वर्षकै उमेरका मोडलिङ करिअबर शुरुआत गरेकी थिइन् ।
मेलानिया डोनाल्डको तेस्रो पत्नी हुन् । उनीहरुको विवाह सन् २००५ मा भएको हो । मेलानिया र डोनाल्टबीच पहिलोपटक सन् १९९८ मा न्यूयार्कमा एक फेशन वीक पार्टीको दौरानमा भेटिएका थिए । उनीहरुले २००४ मा इन्गेजमेन्ट गरेर २००५ मा विवाह गरेका हुन् । उनीहरुको विवाहपछि न्यूयोर्क पोस्टले मेलानियाको न्यूड फोटा प्रकाशित गरेपछि खुबै चर्चामा आइन् ।
अमेरिका बसेको पाँच वर्षपछि मेलानियाले सन् २००१ मा ग्रीन कार्ड पाएकी थिइन् । र, विवाहको एक वर्षपछि २००६ मा मेलानिया अमेरिकी नागरिक बनिन् । मेलानियाले रिपब्लिकन नेशनल कन्भेंशनमा एक भाषण दिएकी थिइन् । जसलाई मिशेल ओबामाको सन् २००८ मा दिएको भाषणको नक्कल निएको थियो । मेलानिया र डोनाल्टको तीन सन्तान छन् ।
Previous Postफेरि जितिन् तेरियाले, नेपालीमा छायो खुशी Next Postपाण्डेलाई ‘उत्कृष्ट निर्देशक अवार्ड’